Inona no toetran'ny temperatures?
Fanamboarana ny toetr'andro
Ny mari-panain'ny efitrano dia mari-pahaizana maromaro izay manondro toerana fonenan'ny olona. Amin'ny ankapobeny, ny olona dia tsy mafana na mangatsiaka rehefa manao akanjo tsotra. Ny famaritana ny haben'ny mari-pana dia tsy mitovy amin'ny siansa sy ny teknika raha oharina amin'ny fanaraha-maso ny toetr'andro. Ho an'ny fanaraha-maso ny fikorontanan'ny toetr'andro, dia hafa koa ny isa arakaraka ny fahavaratra na ny ririnina.
Amin'ny siansa, ny 300 K dia azo ampiasaina amin'ny toetr'andro ihany koa ho an'ny karajia mora ampiasaina amin'ny fampiasana ny mari-pana tanteraka . Ny soatoavina iombonana dia 298 K (25 ° C na 77 ° F) ary 293 K (20 ° C na 68 ° F).
Ho an'ny fanaraha-maso ny toetrandro, ny toerana misy ny mari-pana amin'ny toerana dia 15 ° C (59 ° F) ary 25 ° C (77 ° F). Ny olona dia miezaka manaiky latsaky ny efitranon'ny efitrano fatoriana amin'ny fahavaratra sy ambany kokoa amin'ny ririnina, mifototra amin'ny akanjo anaovany ivelany.
Ny Tempoly dia mifanohitra amin'ny Tempoly
Ny mari-pana eo an-toerana dia manondro ny hafanan'ny manodidina. Mety tsy ho hafanana loatra ny efitra mety hitranga.
Ny singa simika avy amin'ny Air
Famaritana Isomer sy ohatra amin'ny Chemistry
Famaritana Isothope vavy - Chemistry Glossary
Inona avy ireo gaza 4 be dia be indrindra eto an-tany?
Famaritana ny vondrona Mercapto
Fanentanana amin'ny famaritana ny hevitra
Misy sarimihetsika antsoina hoe "Corpus Christi" manondro an'i Jesosy ho Gay?
Top 8 Economics Books Tokony ho tia ny mpankafy amin'ny fanatanjahantena rehetra
Ny andraikitry ny patrouillé ny fonenana maharitra ho an'ny mahazatra
Ireo kintana tena izy izay niaina tamin'ny fahombiazan'ny maintream
Mety hitranga any amin'ny fitsarana heloka bevava any Etazonia
Eritrereto ny fananganana hazo eny an-tokotaninao
Ny fizotry ny fandresen'ny Azteky an'i Hernan Cortes
Moa ny fomban'ny Paka ve any Alemana?
Christian Bale miresaka momba ny "manomboka ny Batman"
Straddle Stretch Routine ho an'ny split
Thylacoleo (Liona mpirenireny)
Fiantohana ho an'ny Skateboarding
Famaritana ny kaonty ankehitriny
Ny famonoana ny filoha William McKinley
Ahoana ny fomba hamolahana jiro fiterahana
Famaritana eutika sy ohatra
Top 7 Fantasy Football Apps ho an'ny drafitra amin'ny iPhones, iPads
Fanadiovana ny hazo Nadia - Ny famantarana sy ny fifehezana
Fanabeazana ara-panahy: fahatsorana
Ny fifampiraharahana amin'ny Galaxies dia manana vokatra mahaliana
Vavaka fanavotana mandritra ny herinandro fanavotana